အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားတဲ့အခါ မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေစေဖို့ ပြောင်းလဲနေထိုင်သင့်တဲ့ အချက်(၃)ချက် - For her Myanmar
အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ပြီး ဗိုလ်ကျခွင့်ရတာ အပျိုဘဝပဲရှိတယ်
ယောင်းတို့ရေ… အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ထောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အသက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီး အိမ်ထောင်ရှင်မဆိုတဲ့ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှုကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ အမည်နာမကြီးက တွင်သွားပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုထိ ကလေးလို့ တွေးနေဦးမယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူကမှ ဒီလိုမထင်မြင်တော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ယောင်းတို့ မိသားစုထဲမှာပေါ့။
အိမ်ထောင်မကျခင်ကတော့ ဗိုလ်ကျ ၊ ဂျီကျသမျှကို မိသားစုတွေက ခွှင့်လွှတ်သည်းခံပေးပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ယောင်းတို့ဆိုးသမျှကို ဘယ်သူမှအနွံတာမခံတော့ပါဘူး။ ငါကတော့မရပါဘူး အရင်လိုဗိုလ်ကျနေဦးမှာပဲ၊ ဆိုးနေဦးမှာပဲဆိုရင်တော့ တစ်နေ့မဟုတ် တစ်နေ့ ယောင်းတို့မိသားစုနဲ့ အခြေအတင်ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။ ဒီတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့ ယောင်းတို့ မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေအောင် ပြောင်းလဲနေထိုင်သင့်တာလေးတွေကို မင်မင်ကဝေမျှပေးသွားမယ်နော်….
Related Article >>> အသက်(၃၀)ကျော်တွေ ဒိတ်လုပ်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားစေတဲ့ အတွေး(၄)ခု
စတာနောက်တာတွေက မိသားစုထဲမှာ ပြောနေကျဆိုပေမဲ့ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျီစားသန်ရင် ရန်များတော့မှာပါ။ ယောင်းတို့် မိသားစုထဲက တခြားမောင်နှမတွေကပါ အိမ်ထောင်ကိုယ်စီနဲ့ဆိုရင် ပိုပြီးတောင် သတိထားသင့်ပါသေးတယ်။ မောင်နှမအချင်းချင်း နစ်နစ်နာနာစနောက်ရင်တောင် သူစိမ်းဖက်လာတဲ့အခါမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ ဆိုရင်လည်း စနောက်ပြီးတောင် မရိုမသေမဆက်ဆံပါနဲ့။ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့ ယောင်းက မရိုမသေပြုလိုက်မိရင် မိဘတွေကိုမမှီခိုတော့တာနဲ့ပဲ မခန့်လေးစားပြုနေပြီလားဆိုပြီး စိတ်ကွက်သွားတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကျတော့ အိမ်ထောင်ကျသွားသည့်တိုင် အိမ်ခွဲမနေဘဲ မိဘအိမ်မှာ နေနေသေးတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် အဓိကပါနော်.. အပျိုတုန်းကလို ပျင်းလို့ အိမ်သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ချင်ဘူး၊ ဟင်းမှ မချက်တတ်တာ၊ အဝတ်လျှော်တာ ဝါသနာမပါပါဘူးတို့ သွားလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ အရင်တုန်းကသာ ဒီလိုနေတာကို မိသားစုကအပြစ်မမြင်ပေမဲ့ ဒီအချိန်မှာတော့ အိမ်ထောင်ကျ ပြုချင်တယ် ၊ အိမ်အလုပ်တွေကိုကျ လက်ကြောမတင်းဘူးဆိုပြီး မျက်စိဆံပင်မွေးစူးလာဖို့ ရာနှုန်းများပါတယ်။ ဒီတော့ယောင်းအနေနဲ့ လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို အပြန်အလှန်ရိုင်းပင်းကူညီပြီး အိမ်တာဝန်တွေ ဝိုင်းလုပ်ပေးမှသာ မိသားစုက ကြည်ဖြူနိုင်မှာပါ။ ဒါက အိမ်ထောင်ကျသွားရင် မဖြစ်မနေ အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးနော်.. သူများအလုပ်မို့ မလုပ်ပေးနိုင်တောင် ကိုယ့်ဝေယျာဝစ္စတော့ ကိုယ်တာဝန်ယူနိုင်တာ အကောာင်းဆုံးပါပဲ။
Related Article >>> အသက်(၂၅)နှစ်ကျော်မှ စတွဲတဲ့စုံတွဲတွေ ပိုတည်မြဲရတဲ့ အချက်(၅)ချက်
အဖေအမေပဲ ၊ အစ်ကိုအစ်မပဲဆိုပြီး ငွေကြေးယူသုံးတာမျိုးတွေ ၊ ခဏစိုက်ခိုင်းပြီး ပြန်မပေးတာမျိုးတွေက အိမ်ထောင်ကျသွားရင် လုံးဝမလုပ်သင့်တာတွေပါ။ ယောင်းတို့ဝင်ငွေနဲ့ အမျိုးသားဝင်ငွေတွေကို တွက်ချက်ပြီး လောက်ငအောင် ချိန်ဆသုံးစွဲရမှာက ယောင်းတို့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီမို့ မိသားစုဆီကပြန်တောင်းသုံးနေတာမျိုးတွေက ကြာလာတာနဲ့အမျှ ငြိုငြင်စရာတွေဖြစ်လာမှာပါ။
ကဲ…ဒီအချက်လေးတွေ တီးခေါက်မိထားမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးတာတောင် မိသားစုနဲ့အချစ်တွေပိုတိုးပွားစေနိုင်မှာပါ။ စိတ်ထဲမှာအဖုအထစ်ကင်းကင်းနဲ့ ချစ်မြတ်နိုးရခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
အလိုလိုကျ အကွိုကျဆောငျပွီး ဗိုလျကခြှငျ့ရတာ အပြိုဘဝပဲရှိတယျ
ယောငျးတို့ရေ… အိမျထောငျတဈခုကို တညျထောငျလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ အသကျငယျငယျကွီးကွီး အိမျထောငျရှငျမဆိုတဲ့ တညျငွိမျရငျ့ကကျြမှုကို ဖျောဆောငျနတေဲ့ အမညျနာမကွီးက တှငျသှားပါပွီ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခုထိ ကလေးလို့ တှေးနဦေးမယျဆိုရငျတောငျ ဘယျသူကမှ ဒီလိုမထငျမွငျတော့ပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ယောငျးတို့ မိသားစုထဲမှာပေါ့။
အိမျထောငျမကခြငျကတော့ ဗိုလျကြ ၊ ဂြီကသြမြှကို မိသားစုတှကေ ခှငျ့လှတျသညျးခံပေးပမေဲ့ အိမျထောငျရှငျမဖွဈသှားတဲ့အခါမှာတော့ ယောငျးတို့ဆိုးသမြှကို ဘယျသူမှအနှံတာမခံတော့ပါဘူး။ ငါကတော့မရပါဘူး အရငျလိုဗိုလျကနြဦေးမှာပဲ၊ ဆိုးနဦေးမှာပဲဆိုရငျတော့ တဈနမေ့ဟုတျ တဈနေ့ ယောငျးတို့မိသားစုနဲ့ အခွအေတငျပွဿနာတှေ ရငျဆိုငျရတော့မှာပါ။ ဒီတော့ အိမျထောငျပွုပွီးတဲ့ ယောငျးတို့ မိသားစုနဲ့အဆငျပွအေောငျ ပွောငျးလဲနထေိုငျသငျ့တာလေးတှကေို မငျမငျကဝမြှေပေးသှားမယျနျော….
Related Article >>> အသကျ(၃၀)ကြျောတှေ ဒိတျလုပျဖို့ ခဲယဉျးသှားစတေဲ့ အတှေး(၄)ခု
စတာနောကျတာတှကေ မိသားစုထဲမှာ ပွောနကေဆြိုပမေဲ့ အိမျထောငျကသြှားတဲ့အခါမှာတော့ ကြီစားသနျရငျ ရနျမြားတော့မှာပါ။ ယောငျးတိျု့ မိသားစုထဲက တခွားမောငျနှမတှကေပါ အိမျထောငျကိုယျစီနဲ့ဆိုရငျ ပိုပွီးတောငျ သတိထားသငျ့ပါသေးတယျ။ မောငျနှမအခငျြးခငျြး နဈနဈနာနာစနောကျရငျတောငျ သူစိမျးဖကျလာတဲ့အခါမှာ မလိုလားအပျတဲ့ ပွဿနာတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။ မိဘတှနေဲ့ ဆိုရငျလညျး စနောကျပွီးတောငျ မရိုမသမေဆကျဆံပါနဲ့။ အိမျထောငျကပြွီးတဲ့ ယောငျးက မရိုမသပွေုလိုကျမိရငျ မိဘတှကေိုမမှီခိုတော့တာနဲ့ပဲ မခနျ့လေးစားပွုနပွေီလားဆိုပွီး စိတျကှကျသှားတာမြိုး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဒါကတြော့ အိမျထောငျကသြှားသညျ့တိုငျ အိမျခှဲမနဘေဲ မိဘအိမျမှာ နနေသေေးတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ အဓိကပါနျော.. အပြိုတုနျးကလို ပငျြးလို့ အိမျသနျ့ရှငျးရေးမလုပျခငျြဘူး၊ ဟငျးမှ မခကျြတတျတာ၊ အဝတျလြှျောတာ ဝါသနာမပါပါဘူးတို့ သှားလုပျလို့မရတော့ပါဘူး။ အရငျတုနျးကသာ ဒီလိုနတောကို မိသားစုကအပွဈမမွငျပမေဲ့ ဒီအခြိနျမှာတော့ အိမျထောငျကြ ပွုခငျြတယျ ၊ အိမျအလုပျတှကေိုကြ လကျကွောမတငျးဘူးဆိုပွီး မကျြစိဆံပငျမှေးစူးလာဖို့ ရာနှုနျးမြားပါတယျ။ ဒီတော့ယောငျးအနနေဲ့ လိုအပျရငျလိုအပျသလို အပွနျအလှနျရိုငျးပငျးကူညီပွီး အိမျတာဝနျတှေ ဝိုငျးလုပျပေးမှသာ မိသားစုက ကွညျဖွူနိုငျမှာပါ။ ဒါက အိမျထောငျကသြှားရငျ မဖွဈမနေ အိမျမှုကိစ်စ လုပျရမယျလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတျဘူးနျော.. သူမြားအလုပျမို့ မလုပျပေးနိုငျတောငျ ကိုယျ့ဝယြောဝစ်စတော့ ကိုယျတာဝနျယူနိုငျတာ အကောာငျးဆုံးပါပဲ။
Related Article >>> အသကျ(၂၅)နှဈကြျောမှ စတှဲတဲ့စုံတှဲတှေ ပိုတညျမွဲရတဲ့ အခကျြ(၅)ခကျြ
အဖအေမပေဲ ၊ အဈကိုအဈမပဲဆိုပွီး ငှကွေေးယူသုံးတာမြိုးတှေ ၊ ခဏစိုကျခိုငျးပွီး ပွနျမပေးတာမြိုးတှကေ အိမျထောငျကသြှားရငျ လုံးဝမလုပျသငျ့တာတှပေါ။ ယောငျးတို့ဝငျငှနေဲ့ အမြိုးသားဝငျငှတှေကေို တှကျခကျြပွီး လောကျငအောငျ ခြိနျဆသုံးစှဲရမှာက ယောငျးတို့တာဝနျဖွဈသှားပွီမို့ မိသားစုဆီကပွနျတောငျးသုံးနတောမြိုးတှကေ ကွာလာတာနဲ့အမြှ ငွိုငွငျစရာတှဖွေဈလာမှာပါ။
ကဲ…ဒီအခကျြလေးတှေ တီးခေါကျမိထားမယျဆိုရငျတော့ အိမျထောငျကပြွီးတာတောငျ မိသားစုနဲ့အခဈြတှပေိုတိုးပှားစနေိုငျမှာပါ။ စိတျထဲမှာအဖုအထဈကငျးကငျးနဲ့ ခဈြမွတျနိုးရခွငျးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
Tags: Family, housework, Married, money, parent, relationships, sibling, tell
Yin Sandi Ko May 3, 2019
Christina Rosy May 21, 2019
မိထွေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင် ဘယ်လိုနေသင့်လဲ ?